QM oo si kulul u cambaareysay tacadiyada Israel ay ku hayso Falastiin – Radio Muqdisho
QM oo si kulul u cambaareysay tacadiyada Israel ay ku hayso Falastiin
Shir ay ku yeesheen magaalada Newyorka Golaha Guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa ayay ku cambaareeyeen tacadiyada iyo gabood falka askarta Yuhuuda ay ku hayaan Muslimiinta reer Falastiin.
Qaraarka oo ay so jeediyeen dowladaha Islaamka oo ay ugu horeeyaan Turkey iyo Algeria ayaa waxaa ogolaatay 120 dal,8 ayaa ka soo horjeestay,waxaana ka maqnaa 45 dowladood.
Danjiraah Mareykanka ee QM Nikki haley ayaa ka soo horjeestay go’aankaasi iyadoo muujisay sida dowladda Mareykanka ay u barbartaagan tahay Israel,waxaana ay tilmaantay in uu yahay mid hal dhinac ah.
Balse Danjiraah Turkiga ee QM iyo diblomaasiyiin badan ayaa difaacay qaraarkaasi,iyagoo ku tilmamaay mid sax ah oo caalamka uu ku muujinayo in ay ka go’antahay in la difaaco shacabka Falastiin.
Dowladaha taageeray aragtida Mareykanka waxaa kamid ah Australia,dalka Jasiiradda Marshall,Micronesia, Nauru, Jasiiradda Solmon iyo dalka Togo,waxana kamid ah wadamada ka maqnaa Britain,Poland iyo dalal kale oo ka tirsan midowga Yurub.
Sidoo kale waxaa taageerayaasha go’aankaasi kamid ah qaar kamid ah dowladaha reer Galbeedka sida Faransiiska,Ruushka,Shiinaha iyo 12 dal kale oo kamid ah Yurub.
Boqolaal shacabka reer Falstiin ayaa ku geeriyootay duqeymaha iyo weerarada Israel ee ka dhanka ah dhulka Falastiin,taasi oo keentay qeylo dhaanta ka imaanaysa dowladah caalamka.
Mareykanka ayaa doonayaa in eedeynta dusha laga saaro Ururka Xamaas ee Falastiin,balse waxaa ka soo horjeestay arrintaasi dowladaha caalamka intoodi badan.
W/Tarjumay(Cali C/qaadir Cali)
Taliye Gorod”Howlgalku wuu socon doonaa ilaa laga ciribtiro argagixisada Alshabaab”+sawirro
Qaabkee loo bixiyaa Sakaatul-fitriga? (MAQAAL)